Spaghetti negariki prawns | Kicheni Mapepa
Wakaneta nekugara uchigadzirira pasita nenzira imwechete? Pano une nzira itsva yekusiyanisa mamenyu ako: Spaghetti negariki prawns. Iresipi ine kunhuhwirira kwegungwa kunozotitorera nguva yakareba mukicheni uye kuti ini ndinogona kuvimbisa iwe uchave unonaka kwazvo.
Kunze kwekutora mukana wemisoro uye makobvu ema prawnni kugadzira muto muto, iyo nzira zvakare inosanganisira cayenne chillies kuti ipe iyo zvinonhuwira. Ini pachangu ndinorida nekuti rakavanzika, asi iwe unogona kuzviita kana usiri shamwari neinonhuwira. Iwe unotsunga kuzviedza here?
350 gr. yemapondo
3 tablespoons itsva parsley
Isu tinosvuura iyo prawns uye tinoisa ese ari maviri misoro uye hombodo muhombodo ine akati wandei mashupuni emafuta emuorivhi. Pheka pamusoro pekupisa pakati nepakati tinopwanya misoro yemaprawuni ane chipunu chakakoswa kuitira kuti vaburitse muto wavo wese.
Kana mateko ari mapinki, isu tinoshandisa bhurandi uye tinoirega ichidzikira zvachose.
Saka, tinowedzera girazi remvura, Vhara uye ubike kwemaminitsi gumi nemashanu. Isu tinosvina matehwe nemisoro kuti titore muto wepora wakanyatso chengetwa.
Isu tinobika spaghetti mupoto ine mvura nemunyu, uchiteedzera rairo dzemugadziri. Kana wapedza, dhonza uye chengetedza.
Ipo pasita iri kubika, tinocheka garlic zvakanaka uye chilli uye tinochengetedza.
Pisa 3 maspunio emafuta emuorivhi mugango rinopisa pamusoro pekupisa kwepakati. Isu tinowedzera ma prawns uye kana iwo ari epingi uye endarama zvishoma, tinoaburitsa.
Isu tinowedzera imwe kana maviri mamwe mashupuni emafuta mupani uye sauté iyo minced garlic chillie. Kana gariki yatanga kutora ruvara, wedzera hafu muto weprawn uye yakatemwa nyowani parsley, uye simudza kupisa kuunza muto mumota uye udzikise.
Isu tinosanganisa iyo spaghetti kune pani uye sanganisa kuitira kuti ivo vakwanise kuiswa mushonga pamwe nemuto. Kana zvichidikanwa, wedzera muto mudiki kuitira kuti arege kuoma.
Tisati tashanda, tinowedzera ma prawns.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Pasita » Spaghetti negariki prawns
Salmon ine inotapira chili sosi